Xil. Fiqi oo afar qodob dul istaagay isagoo ka hadlaya muranka maaliyadda ee taagan – Bandhiga
Xil. Fiqi oo afar qodob dul istaagay isagoo ka hadlaya muranka maaliyadda ee taagan
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo la ogyahay in uu katirsan yahay mucaardka dowladda ayaa ka hadlay warbixintii guddiga maaliyadda baarlamanka ee musuq maasuqa ku eedeysay xukuumadda Kheyre, iyo is-difaacidda wasaaradda maaliyadda ee kulankii baarlamanka ee maanta.
Hoos ka aqriso qoraal uu Fiqi soo dhigay baraha bulshada.
In Xubnihii guddiga maaliyadda la kala jabiyo.
In Wasaaradda Maaliyadda ay warbixinno cay, aflagaado iyo heeso Golaha ka hor jeediso, ayagoon si waafi ah u bixin jawaabaha eedaymihii loo soo jeediyey.
In xildhibaanadii wasiirada ahaa qasab looga dhigo in ay shirkii maanta tagaan, sacbiyaanna marka ay maqlaan hadal u roon.
In guddooomiye ku xigeenka labaad oo kulankii maanta shir guddoominayey uu golaha afduubo, ajandihii maanta la ansixiyeyna uusan xildhibaanada ka baxsan guddiga maaliyadda fursad u siin ay uga hadlaan.